Ngathi | Imbuyekezo Archibald Tech Co., Ltd.
I-Archibald Tech Co, Ltd yabhaliswa ngo-2014 kwaye igqibe iminyaka emi-6 yembali. Inkampani yethu yenye yamashishini asekhaya ambalwa agxila kwimveliso yokukhanyisa yezityalo eziphezulu ze-LED. Yingqokelela yophando lwezifundo zokukhanya kwezityalo kunye neemveliso. Itekhnoloji yophando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo zidityanisiwe. Injongo yenkampani "kukuhlakulela iitalente zokukhanyisa izityalo kwaye ube yinkokeli ekukhanyiseni izityalo", kwaye umbono "kukuba ngumboneleli ngenkonzo wokuqala wokukhanyisa izityalo, ukuze kungabikho zityalo zinzima emhlabeni." Ukusebenzisana njengesiseko, ukwaneliseka kwabaxhamli njengoyena ndoqo, kunye nentsebenziswano yokuphumelela "
I-Archibald Tech Co, Ltd ivelisa zonke iintlobo zezibane zokukhulisa ukukhanya kwezityalo ze-LED. Iimveliso zokukhanya zokongeza zifumene isatifikethi seFCC, isatifikethi se3C, isatifikethi seEC, isatifikethi sokugcina amandla, kunye nenani lamalungelo awodwa omenzi wechiza kunye nemodeli yokusetyenziswa. Isikali seshishini siyanda ngokuthe chu, itekhnoloji yesibane yezityalo ikhule kakhulu, kwaye umgca wemveliso uya ugqibelela ngakumbi. Ngokokubonisana kwitekhnoloji yokutyala kwangaphambi kokuthengisa, uyilo lweemveliso ngexesha lokuthengisa, nasemva kweenkonzo zentengiso yokuthengisa, iphumelele indumiso evela kubasebenzisi. Ngokunyuka kweefama ezithe nkqo kunye nokulinywa kwendlu eluhlaza, kunye nangakumbi nangakumbi nangakumbi ngabathandi bokutyala, iimveliso zethu zithengisiwe kwimimandla eyahlukeneyo yelizwe, iYurophu kunye ne-United States, njl.njl. abathengi abaninzi kwiimarike zasekhaya nakwamanye amazwe!
Ezona mveliso ziphambili zenkampani zezi:
Uthotho lwezibane zezibane ze-LED: I-COB yokudibanisa ukukhanya okuphezulu kwamandla e-LED, ukukhanya kwesityalo esipheleleyo se-LED, ukukhanya kwezityalo ze-LED, ukukhanya kwe-CREE ye-LED yezityalo, ukukhanya kwebhari yezityalo ye-LED engenamanzi;
Iimveliso zokukhanya kwezityalo ze-LED zisetyenziswa ngokubanzi kwizindlu zokugcina izityalo, kwiifektri zezityalo, ukulinywa kwendlu eluhlaza, ukulinywa kweentyatyambo, izitiya zangaphakathi, ukulinywa kwamanzi, ukulinywa kwemibhobho, iifama, izityalo ezinamanzi, izityalo zokutshiza, inkcubeko, njl.
Ukutyala kwizindlu zokugcina izityaloIsiqhamo esikhulu
Iswiti kunyeizinga lokukhula kwezityalo liye
Planting Ukutyalwa kweHydroponic Nikezela ngokufanelekileyo abathengi ngombala kunye nokukhanya Ubunzulu obufunwa zizityalo.
Ukutyala ngaphakathiNciphisa umjikelo wokukhula,
ukuphucula isivuno kunye nomgangatho.
Ukulima izithole Ukutyala izithole ngobuchule,ityhubhu yenkcubeko yezibane, ukonga amandla ngakumbi, ukubola kokukhanya okuncinci kunye nefuthe elingcono.
CultureImvelaphi yezithole zezithole Inkcubeko yezicubu kunye nezithole zisasazwa ngoqeqesho,kwaye izityalo zikhula ngokulinganayo kwaye Yomelele ngakumbi.
Ukukhanya kwesityalo esipheleleyo Ukuhanjiswa okuthe kratya kokukhanya
ibonelela ngebhanti ye-spectral efunekayo ekukhuleni kwezityalo.